Book kucatshulwe: Don't Envy the Bench — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Ixesha kuphela abenza ngayo kwi phantsi ngelo kanye ekupheleni komdlalo-uyazi, xa bebeka kwi guys baziva kakubi ngenxa. Ndiyathanda ndizixelele Bakubeka kum abo imizuzwana yokugqibela ukuze ndikwazi kukhuseleke win. Njengoko wavuthulula izandla kunye neqela elichasayo emva ngombane wokugqibela, Ndaziva ngathi abadlali snickering ngaphakathi xa wajonga kum, wathi, "Umdlalo omhle."
Xa zivela kwigumbi yangasese emva imvula wam, mntu wayefuna umfanekiso nam. Namnye abantwana yesikolo phakathi wakhangela phezulu kum. Kugule nokuba iqela wammonela kum. Ngoba? Kuba mna Spike ngaphezulu Lee ngaphezu Michael Jordan. Ndandizithanda neemuvi Ndinxibe ijezi. YayindiM lendoda zange Ungenile kwi umdlalo, yaye akukho bani abakufuni benchwarmer.
Andinako na ukukhumbula umntu evuthela umoya jumper Yenza kwaye ebiza igama ngumdlali wendima olungaziwayo. Abo bafo kusekho iingcali, kodwa ukuba onqwenela ukuba ndandazile iindawo umdlali yomnyazi, ukuba ngokuqhelekileyo starter, loo mfo lowo phandle ukusuka kwincam-off ukuba ngombane wokugqibela. Niya kuzilibala xa Jordan ivuliwe izandla emoyeni okanye xa Ray Allen ukubetha ukuba bangagqithi ngombane. Abo ke guys ofuna ukuba. Zima kwi intshukumo kwezo zihlandlo engundoqo, nje spectating. Kodwa ngenxa yesizathu esithile sisenza esahlukileyo xa kuziwa ebomini. Wonke umntu ufuna ukuba benchwarmer.
Ndichaza ukuthini xa esitsho? Ukuba wabonisa phezu ikhampasi kwikholeji ngazo nento udliwano abafundi malunga neenjongo zabo zesiqingatha, ubuya akeva okuninzi ephila ngenxa uKumkani. Wena Ndingathanda beve ngakumbi fun singacinganga udlale indima ebalini Grand. Mhlawumbi Ndingathanda unokuva ezinye 7:00 a.m. ingqiqo. Ndiya ndikulungele sizakucinga ukuba Ndingathanda ukufumana iimpendulo ezifanayo kwisikolo esiphakamileyo okanye isakhiwo ofisi. Sonke sibe neminqweno, kodwa uThixo azisoloko kuzo.
Ndiyathemba ukuba awuzithathi oko ndikutshoyo njengoko kugwetywa ngokuzenza. Mna andinguye umhlalutyi imovie trashing ebambeleyo; Ndingu zolinganiso exhasayo bezama ukufumana imigca zam kunene kakhulu. Ndingathanda ukuba uyaxoka ukuba ndithe uYesu ibonakala intle. Ekunene akusoloko uziva kunene.
Ndikhumbula ixesha, kungekudala emva koko ndajoyina abasebenzi ecaweni yam, xa babesiya bonke abahlobo bam ukuba enze kwi umculo umthendeleko eningenakukholwa. Ndandifuna ukuba kubekho kakubi kangaka, kodwa ndikwazi ukwenza oko kuba yawa kwiveki yokuqala emsebenzini wam omtsha. Kwafuneka alwe ukumonelwa entliziyweni yam. Ngakumbi xa ndabona ukuba ufaka iifoto online ngamava abo emangalisayo.
Ngamanye amaxesha siziva ngaloo ndlela ubomi. Kulula ikhwele abanye, ingakumbi xa sele besenza into omkhulu abahlobo bam babesenza. Kodwa naxa ukuba abantu baphila engalunganga, Maxa wambi sizibona ndilangazelela ukuba idle. Kwaye lonto yenza ukulandela uYesu sisenokufuna ezazithinjwe mdlalo, bengazivumeli subbed kwi. Kodwa kutheni ikhwele abanye bacinga siya uphoswa yinto?
KUTHENI Ndicinga ukuba uphoswa?
Enye yeengxaki yethu kukuba siyakwazi ukubona kuphela oko kulungileyo phambi kwethu. Thina kuphoswa umfanekiso omkhulu. Loo nto ifana ikhamera xa izinto phambi zikwi ekugxilwe kwaye yonke into ngasemva kufiphale. Kufuneka silungelelanise iilensi ukuze yonke umfanekiso iya kucaca.
Kukho na umntu emhlabeni lowo andisokoli ukubona ngokucacileyo. Yinto enye ngemiphumo iintliziyo zethu yesono. Kodwa xa uzilahlela ubutsha kwi equation, yongeza ukuya intlekele. abaneminyaka engama-One nzima ukuhamba kakuhle, mabini- somethings nzima ukubona kakuhle.
Yinto Akumangalisi. Yinto yinxalenye ukuba kuthetha ukuthini ukuba abatsha kwihlabathi bewile. ebomini bethu ukuba lifutshane kwaye siye kuphela ndiyibone kakhulu. Kunzima ukucinga ukuba yonke zephazili xa uye kuphela wayibona amaqhosha amathathu. Oku akuthethi ukuba kufuneka banityakatye ngokwethu kukudana; kodwa akuthethi kufuneka ulumkele, kuba njengeli abanesono kunokukhokelela kwintlekele.
Ngaba ukhe wazama beqhuba ikhephu? Christmas emva kokuba ezelwe umntwana wam wokuqala, ikhephu eyoyikekayo ukubetha umfazi wam kunye Nam saqhuba wabuyela DC ePittsburgh. Ikhephu kongamela izibane kwi XL zethu walala ukuze iiwipers ayikwazanga ukugcina kunye nayo. knuckles zam mhlophe ndi soyika bangenwa ivili; Ndaqonda ukuba ubomi umfazi unyana wam esezandleni zam.
Mna wayesoyika. Ndandibona kuphela intshi ezimbalwa phambi kobuso bam, ngoko ngokoqobo babengazi apho ndandiye khona. Andizange ndiyazi into phambili, kwaye kwafuneka ukuba Ndiyathemba ukuba sonke ubale. Ukuba akukho indithuthuzela. Ke ndingenakondela ukuba kukho imoto wayeka phambili okanye umntu esosula off iifestile bakhe stop-kwaye-hamba kwezithuthi.
Mna na wakhankanya iindlela cwinana kodwa. Bakubethe iziqhoboshi zakho kwakuthetha imoto yakho iqina ngathi itakane enxibe iikawusi ekumgangatho wetayile. Siyaqondakala isizathu sokuba ubuncinane othandwayo drive lam ngonaphakade. Mna ubona kufuphi, kwindawo ezibuthelezi.
Ngaba wakha wacinga ngendlela njengeli yintlekele ngayo ebomini bethu? Ukuba senza kuphela izigqibo ezisekelwe oko kulungileyo phambi kwethu, sisingise ukuze silubaleke e ngozini. Kakhulu uninzi lwethu ngokuzama ukuphila ubomi bethu kungekho ngokuphathelele oko kwenzeka kamva.
Ukufumana uyiseleyo qela kusenokubonakala ngathi ingcamango elungileyo mzuzu, kodwa mhloneli uThixo kwaye ikhokelela izigqibo osisiyatha. Sleeping ngamakhwenkwe okanye isithandwa sakho kusenokubonakala ngathi win kwi mzuzu, kodwa ukuba uhlobo obusondeleyo zange yenzelwe ukuba babuxhamle ngaphandle umanyano obubodwa umtshato.
Siza yangene kwezi ntlobo izigqibo ngakumbi njengoko siye kwezi ncwadi, kodwa ingongoma, kufuneka sicinge umfanekiso omkhulu. Wonke isigqibo senza liqhekeza encinane iphazili ezinkulu. Ngaphandle ujonge lo mfanekiso omkhulu zeencwadi, siza kubeka iinyama ngokungachanekanga lonke ixesha. Yinto ebuhlungu ukuba babaxabise ngephanyazo ngexesha ngaphezu bonke ubomi.
*Oku i ngcaphulo kwisahluko sesithathu incwadi entsha Uhambo ngayo, phakama. Sukulibala, xa phambi-order Rise ngokuthi EyoMqungu 26, uza kufumana iqelana izipho simahla, kuquka nomzila ibhonasi esingayilungisanga phezu album. Yabona, bonke bephela iinkcukacha ngentlawulelo izipho zenu: http://risebook.tv/preorder
Emanuel • EyoMqungu 15, 2015 ngexesha 12:16 pm • impendulo
Mna umculo fan enkulu wakho kodwa Ndandingazi ukuba bhala kakuhle. Ngamana uThixo ukugcina anisikelele> BTW Ndivela Suriname. Mbonge phezulu
Mat • EyoMqungu 15, 2015 ngexesha 1:54 pm • impendulo
Unabo ngendlela emangalisayo ngamazwi umntu. Qhubeka!
Kwaba njalo Chileshe • EyoMqungu 16, 2015 ngexesha 5:45 mna • impendulo
Isivakalisi yokugqibela kum. yako ukuyixabisa ngephanyazo ngexesha ngaphezu bonke ubomi. Ujonga phantse lonke yimveliso ninomona apho otheres na ebomini. Makhe Ndiyambulela uThixo kuba apho siya. Kukho isizathu sokuba kukho. nokuba, kufuneka sivume kwako konke oko kuye.
Kiggundu Brian • EyoMqungu 16, 2015 ngexesha 2:19 pm • impendulo
Wowu!!.Ayikwazi alinde ukufumana olu ncwadi kodwa sifumana njani phantsi apha #uganda Africa
Kiggundu Brian • EyoMqungu 16, 2015 ngexesha 2:24 pm • impendulo
Wowu…!!! umthande oku umculo wakho usoloko mna uphefumlela kwaye asili- Mera kulo kodwa njani apha ezantsi Uganda Afrika!.Ngamana uNdikhoyo kukusikelela
Shantiki • EyoMqungu 16, 2015 ngexesha 9:13 pm • impendulo
Le ngcali kwandenza cinga inento ukhetho mna nade ebomini bam.
Carlton • EyoMqungu 17, 2015 ngexesha 1:19 pm • impendulo
Kwakumnandi ngcali lenene sokuyila kwaye kakhulu neyoyikekayo #stayblessed.
Gao • EyoMqungu 18, 2015 ngexesha 1:50 mna • impendulo
Oh!UThixo ukuba ungenza kuphela kule ncwadi…iqhekeza liyoyikeka kwaye ngoku ndiza babecinga umfanekiso omkhulu(incwadi)..#iBhayibhile kunye ssingsToU
JieWoo • EyoMqungu 19, 2015 ngexesha 2:39 pm • impendulo
WOWU! wafumana iimpendulo!!! Enkosi Mayne wena! GBU! Imibuliso evela eJamani!
Terrell • EyoMqungu 20, 2015 ngexesha 2:07 mna • impendulo
Trip Lee, Ndilahlekelwe indlela yam kunye Journey wam ukukhonza uYehova. Ndakhulela ngumKristu, kodwa ningashukunyiswa nimke iimfundiso zayo. Oku bendingekho de ndiliphulaphule Ubomi bakho album isibini yeentshumayelo youtube Good kwaye bandahlukanisa umva kwicala leNkosi. Ndifuna ukuthi enkosi brotha yam.
tamsyn • EtiMnga 28, 2015 ngexesha 7:35 mna • impendulo
Uhambo usenyongweni. A yinkokheli. Ibali lakho yandikhumbuza ubuhle Ndiye ndafumana kulwalamano lwam noYesu nendlela ebalulekileyo izigqibo luza kuqhubeka ukuwayilela ikamva lam. Iphelela ibonakalalise Royal uYesu. Wanga wonke umfundi ukufumana ubutyebi kule bhokisi yobukumkani ubutyebi ekuthiwa SUKUMANI. Yonke imithandazo indlela esuka Kapa, Mzantsi Afrika.